Global Voices teny Malagasy » Shina : Miteraka “Fihazàna Trozona” Ny Saritaka Avy Amin’ilay Lalao Rosiana Famonoantena Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Jona 2017 5:28 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Nancy
Sokajy: Azia Atsinanana, Rosia, Shina, Fahasalamàna, Fanampenam-bava, Lalàna, Mediam-bahoaka, Tanora
Amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy no ikarakaràna ilay lalao  ary tsy maintsy manefa andiana asa tsy maintsy atao ireo mpilalao, isan'izany ny fifohazana amin'ny 4: 20mn mandritra ny 50 andro misesy. Ahitàna fampijaliantena ny sasany amin'ireo asa tsy maintsy atao ireo ary farany dia mety amporisihina hamono tena ireo mpilalao.
Efa tompon'antoky ny famonoantena 130 mahery tany Rosia ny “Blue Whale” hoy ireo Fampahalalàm-baovao maro any Rosia. Efa niparitaka be tamin'ny alàlan'ny gazetiboky kely  tany amin'ny firenena maro izany, isan'izany i Shina, na dia efa nampitandreman’  ireo mpanome vaovao toy ny Radio Free Asia, ny Meduza ary ny haba-tranonkala mpanamarina ny zava-misy Snopes aza fa tsy voaporofo sady angamba tafahoatra loatra ilay fanamarihana.
Tamin'ny 8 May, haino aman-jery Shinoa marobe mpanome vaovao no namoaka fampitandremana momba ny “firongatry” ny lalao famonoantena Rosiana “Blue Whale”, amin'ny famporisihina ireo mpisera amin'ny aterineto mba hiteny amin'ny mpitandro filaminana rehefa mahita vondrona lalao. Nofintinin’ ny STV, mpanome vaovao ao an-toerana, ireo tatitra ao amin'ny vovonan'ny haino aman-jery sosialy Weibo :
Avy amin'ny antson'ny mpitandro filaminana misahana ny aterineto mba hanaovana ankivy ilay lalao  no fototr'ilay fampitandremana. Any Shina, izay efa mahazatra hatraiza hatraiza ny sivana atao amin'ny aterineto, dia lasa fanentanana ara-politika ny sahoan-dresaka manodidina ilay lalao. Nandrakotra io  tranga io  ihany koa ny Global voices tany amin'ny mpifanolo-bodirindrina anankiroa amin'i Shina any Azia Afovoany, Kyrgyzstan sy Kazakhstan.
Tamin'ny 9 May, ny ampitson'ny fampitandreman'ny haino aman-jery, dia nambaran'ny  Fikambanan'ny Tanora Kaominista Shinoa tao amin'ny Weibo ny fanombohan'ny fanentanana momba ny “Tetikasa Fihazàna Trozona” :
Araka ny tatitry ny haino aman-jery ao an-toerana,  dia nakaton'ny andrarezin'ny aterineto Tencent ny vondrona QQ am-polony ary nosakanany ny tenifototra mifandray amin'io tsy ho hita amin'ny milina fikarohany. Nakaton'ny Baidu ny sehatra fifanakalozan-kevitra rehetra ahitana ny teny fototra toy ny “Blue Whale” na ” Blue Whale game”.
Notantarain'ilay  tanora tamin'ny mpitandro filaminana fa tamin'ny 9 May izy no niditra tao amin'ilay vondron'ny lalao QQ “Blue Whale”, taorian'ny nanombohan'ireo haino aman-jery mpanome vaovao ny fanentanana.
Hareraha-tsaina tsy voatsabo no antony voalohany mahatonga ny famonoantena. Azo tsaboina ny harerahan-tsaina ary azo sorohana ny famonoantena. Afaka mahazo fanampiana avy aminà antso tsimbaratelo momba ny olana mitarika hamono tena sy ara-pihetsehampo ireo tratr'izany. Tsidiho ny Befrienders.org  mba hahitanao ny fanampiana ety anaty aterineto hisorohana ny famonoantena ao amin'ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/30/100425/
 voasambotra : http://www.globaltimes.cn/content/1047245.shtml
 gazetiboky kely: https://www.thesun.co.uk/news/3002981/blue-whale-game-suicide-russia-rules-challenge-social-media/
 hanaovana ankivy ilay lalao: http://www.globaltimes.cn/content/1046921.shtml
 hafatra mitovy amin'izany : http://www.weibo.com/2652420623/F2hkw1RLW?from=page_1001062652420623_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1494988320843
 tatitry ny haino aman-jery ao an-toerana, : http://mt.sohu.com/20170513/n492881883.shtml
 mpitandro filaminana ao Guangxi, : http://weibo.com/3201647855/F3unMyvlC?refer_flag=1001030103_
 taridàlana Happy Blue Whale : http://www.weibo.com/2056394313/F2JxHaaIE?refer_flag=1001030103_&type=comment#_rnd1494991879742